‘चितवनको व्राण्ड हो रत्ननगर महोत्सव २०७४’ – Saurahaonline.com
‘चितवनको व्राण्ड हो रत्ननगर महोत्सव २०७४’
रत्ननगर उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा हुने रत्ननगर महोत्सव २०७४ को तयारीलाई तीब्र पारिएको छ । आगामी पौष २७ देखि माघ ७ गते सम्म रत्ननगरको टिकौली चौरमा हुने महोत्सवलाई प्राभावकारी बनाउन तयारी तीब्र पारिएको हो । महोत्सवको स्टल निर्माण र प्रचारप्रसार काम तीब्र रुपमा भईरहेको संघले जनाएको छ । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुने सो महोत्सवको चितवनको कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आर्थिक महत्वका क्षेत्रहरुको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीसंग अभिमुखीकरण गराउने प्रमुख उद्देश्य रहेको संघका अध्यक्ष तथा महोत्सवका संयोजक राजाराम रेग्मील जानकारी दिनुभएको छ ।
यसै विषयमा अध्यक्ष रेग्मीसंग गरिएको कुराकानीको संक्षेप्मा
के रत्ननगर महोत्सवको तयारी ?
तयारी लगभग अन्तिम चरयामा पुगेको छ । अहिले देख्न सक्नु हुने छ । प्रवेश द्धार निमार्ण, स्टल निमार्ण, कृषि, पोल्ट्री, चितवनका उत्पादन, दैनिक उपभमेग्य वस्तु, आइटी, वालउधान लगायतको स्टल निर्माण लगभग सकिएको छ । भने अन्य केही वांकि तयारीमा छौ लगभग तयारी पुरा भएमो छ भन्दा पनि हुन्छ ।
यस पटक रत्ननगर महोत्सवमा प«मुख आकर्षण के रहेको छ ?
हामीले विं.सं.२०५७ मा दशै मेलाको रुपमा महोत्सव सुरुगरेका थियौ र अहिले सम्म निरन्तर छ । यसपटक पनि हामीले कृषिलाई नै पहिलो प्राथिमिकता दिएका छौं । महोत्सवमा कृषिको व्यवसायिक विकासको लागि उत्पादित बस्तुको बजारीकरण र कृषिमा आधुनिकरणलाई ध्यान दिईएको छ । यस पटम वगुर पालन र यसको परिकार पनि मुख्य आकष्र्णको केन्द्र हो । भने हामिले यसपटक महोसव परिसरमा धरहरा समेत निमार्ण गरिएको छ । यो चितवन व्राण्डको रुपमा स्थापित महोत्सव हो । जो जग जायर छ ।
शोभायात्राको तयारी कसर गर्दै हुनुहुन्छ ?
महोत्सवको शोभायात्रालाई वृहत वनाउन लागिएको छ । शोभायात्रामा यस पटक संघसंस्था,आमा तथा महिला समुह,विद्यालय,कृषि,पशुपंक्षी लगायतका ५ सय भन्दा वढिको सहभागीता रहने छ। महोत्सवको पहिलो दिनलाईनै विषेश वनाउने तयारी रहेकोले पनि यसपटक मधेशी समुदायको पहिचान झल्कने झाँकी समेत यस महोत्सवमा हेर्न पाईने छ ।
स्कुलका वच्चाहरु प्रयोग गरन्छि कि गरिदैन ?
राम्रो प्रश्न गनुभयो । हामि वालवच्चालाई शोभायात्रामा नल्यिादिन सवै कलेज स्कुललाई भनिसकेको छौ । हामि आफै पनि वालबालिको लागि काम गरेका छौ । हमि सचेत छौं । वच्चाहरुको शोभायात्रामा सहभागि हुदैन ।
सुक्षाको व्यवस्था कसरि मिलाइएको छ ?
हो सवै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो सुरक्षा हो । हामिले सुरक्षा व्यवस्था राम्रो वनाएका छौ । नेपाल प्रहरी, शस्त्र प्रहरीर र आन्तिरिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाईएको छ भने । महोत्सव परिसरमा सिसि क्यामेरा जडान गरेर सुरक्षा व्सवस्था मिलाईएको छ ।
यसपटक प्रवेश शुलक कति राखिएको छ ?
हो हामिलाई थाहा छ महंगि वढेको छ तर पनि सवै कुरा मध्यनजर गर्दै हामिले अघिल्लो वर्षको मुल्य नै यस वर्ष पनि यथावत राखिएको छ । भने विधार्थीलाई ५०५ छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
राज्यले नै सम्मान गरेको जेष्ठ नागरिकलाई प्रवेशको व्यवस्था के छ ?
हो राज्यले नै सम्मान गरेका हाम्रा अभिभावकको लागि जेष्ठ नागरिकको परिचय पत्र ल्याएमा प्रवेश निशुलक गरिएको छ ।
एकै समयमा अन्य मेला महोत्सव पनि हुदै छन् नि ?
हो तपाइले भन्न खोज्नु भएको खिचरा महोत्सवको सन्दर्भ हुनु पर्छ । हामी दुई ओटा महोत्सव आयोजक विच कुराकानी भएको छ र एक अर्कामा सहयोग गर्ने कुरा भएको छ । वाहिर कहाँ कतै त्यस्तै कुरा पनि सुनिन्छ त्यो सत्य होइन । हामी एक अर्कामा सहयोग गछौ ।
महोत्सव भने पछि कलाकारकोे पनि कुरा आउछ , अस्पालि क कस्को सहभागि हुन्छ ?
हो हामीले यसपटक पनि राष्ट्रय स्तरका ख्याति प्राप्त कलाकारहरुको उपस्थिति हुने छ।
फुड फेष्टिवलको तयारी के छ ? फेष्टिवलको आकर्षण के हो ?
कृषि र पर्यटनलाई विषेश प्राथमिकता दिदै आएको रत्ननगर महोत्सवमा यस पटक कृषि अन्तर्रगत वंगुर व्यवसायको प्रर्वद्धनका लागि फुड फेष्टिवल आयोजना गरिन लनगिएको छ ।
बंगुर व्यवसाय फस्टाउने क्रममा रहेकाले यसको प्रर्वद्धनका लागि महोत्सवको अवधिमा रत्ननगरको टाँडीमा फुड फेष्टिवल आयोजना गर्न लागिएको हो । रत्ननगर महोत्सवमा कृषिका कुनै न कुनै क्षेत्रलाई जोड दिदै आएको र यसपटक वंगुर व्यवसाय फस्टाउँदो व्यवसायको रुपमा रहेकाले यस पटक वंगुरबाट बन्ने मासुका परिकारलाई फुड फेष्टिवल महत्व दिईएको हो फुड फेष्टिवलमा ५० वटा स्टल रहनेछन् । जसमा वंगुरका साथै अन्य स्टल समेत रहने छन्।
व्यस्त समयका विच हामिलाई समय दिनुभएको मा धन्यवाद वस्क्त गर्दछु ।
यहाँले पनि तपाइको लाकेप्रिय मिडिया मार्फत हाम्रा केहि भनाइ राख्ने मैका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चहान्छु मेरो व्यक्ति र संस्थाको तर्फवाट ।